Hoteellada waaweyn ee Toledo | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Guryaha, Espana
Waxaan aaminsanahay in markaad u safreyso magaalo duug ah, ay ugu fiican tahay inaad sii joogto hudheelada leh qaab ama inay ka shaqeeyaan dhismayaal taariikhi ah, boqol sano jir. Ku dar soo jiidashada booqashada, miyaadan u malayn?
Tusaale ahaan, Toledo Waa magaalo Isbaanish ah oo cajaa'ib leh, xarunteeda taariikhiga ahna waa mid fantastik ah iyo meesha ugu fiican ee lagu nagaan karo. Taasi waa sababta maanta aan u raadsaday xulashooyin ku saabsan hoyga halkaan ku yaalay oo lagula taliyay. Maanta markaa hudheelada leh soojiidashada Toledo.
1 Hoteelka Pintor El Greco
2 Hoteelka Carlos V
3 Hoteelka Casona de la Reyna
Hoteelka Pintor El Greco
Kani waa hudheel ku yaal afar xiddigood qaybta kaasoo ku yaal wadada Alamillos Del Tránsito, xaafadda Yuhuudda. Waxay u jirtaa dhowr daqiiqadood Matxafka El Greco iyo Santa María la Blanca Synagogue qurux badan aadna ugu dhow Qasriga Fuensalida. Maaha dhisme hore laakiin waxay umuuqataa sidii.
Hoteelka Waxay leedahay 57 qol oo ku baahsan shan dabaq. Dhammaantood waxay leeyihiin qaboojiye iyo isku-xirka internetka Wi-Fi oo bilaash ah, musqusha gaarka loo leeyahay iyo telefishanka oo wata kanaallo dijitaal ah. Waxaa jira mataano caadi ah, mataano sarreysa, mataano + dheeri ah, mataano sarreysa + qolal dheeri ah. Haddii aad rabto raaxo badan, waxaa jira qolal qiimo sare leh, oo ka mid ah kuwa ugu fiican shaki la'aan qolka qiimaha leh ee godka leh.
Hoteelka oo dhan wuxuu leeyahay qaab u dhexeeya qadiimiga ah iyo kan casriga ah. Dhismuhu sidoo kale wuxuu leeyahay jaranjarada, wuxuu leeyahay adeeg duugis iyo aqbal xayawaanka rabaayadda ah. Gudaha waxaa ku yaal makhaayad oo hadda fasaxyadu soo dhowaanayaan waxaa ku yaal liiska Sannadka Cusub iyo Sannadka Cusub. Hadaad rabto inaad fasaxa gasho ama aad gasho jiilaalka taas waan kaaga digayaa waxaa jira Jimco Madoow 24/11 ilaa 2/12 joogitaanada inta udhaxeysa Diisambar 25 iyo 31 Maarso ee loogu talagalay a 30% dhimis.
Hoteelka Carlos V
Kani waa hudheel ku yaal saddex xiddigood kaas oo ku yaal Plaza Homo Magdalena, wadnaha magaalada. Bixinta 67 qol dhisme dhowaan la dayactiray oo la dayactiray, dhammaantoodna loo qaybiyay qolalka caadiga ah iyo kuwa caymiska. Dhammaantood waxay leeyihiin qaboojiye iyo kuleyliyaha dhexe, musqusha, taleefanka tooska ah ee tooska ah iyo dayax gacmeedka iyo telefishanka telefishanka. WiFi waa bilaash, waxaa ku yaal bar, baarkin dhig iyo wiish.
Huteelku wuxuu leeyahay meel wanaagsan sida waxay u jirtaa 200 mitir oo kaliya fagaaraha weyn, hooska Alcazar, kaliya 10 daqiiqo laga bilaabo xarunta tareenka ee AVE iyo laga bilaabo boosteejada basaska, iyo saddex ka socota Plaza de Zocodover taariikhiga ah. Dhismuhu wuxuu bilaabmay dabayaaqadii 40-meeyadii, asal ahaan waxaa ciqaab looga dhigay isbitaal, laakiin sidaan sheegay waa la dayactiray. Dadka caanka ah sida Catherine Deneuve, iyadoo uu hagayo Luis Buñel, John Wayne, Rita Hayworth, Rock Hudson ama dhawaanahanba Johnny Depp.
Hoteelka Carlos V ayaa leh hal, laba jibaar, saddex qol ah, oo leh jacuzzi, oo leh aragtida Toledo, dhammaantood waa la dayactiray, dhammaantoodna waa kuwo aad u deggan. Qolalka kelidood ah waxay qiyaastii yihiin siddeed, sagaal mitir laba jibbaaran, labalaab u dhexeeya 13 iyo 16 mitir, waa isku mid waa qolka ugu sarreeya ee laba-laaban oo leh hydromassage, saddex-geesooduna waa isku cabir.
Aroortii, qolka nasashada ee hudheelka hudheelka, caan ku ah Desayuno Mudejar, galabtiina wax ka fiican majiraan inaad ku fariisato berriga quruxda badan, Saqafka sare ee Carlos, oo leh aragtiyo waaweyn oo ku saabsan Alcazar, Cathedral iyo dhammaan Toledo. Martida ku socota gawaarida kaliya 200 mitir waxaa jira meel baabuurta la dhigto oo waardiye ah oo qiimaheedu yahay 15 euro maalintii.
Hoteelka Casona de la Reyna
Hoteelkani sidoo kale waa ka yimid saddex xiddigood waxayna ku taalaa wadada Carreras San Sebastián. Waxay ku taal Ronda de Toledo, shan daqiiqo ayaa u jirta Xaafadda Yuhuudda iyo Kaniisada. Waa hoteeladii ugu cuslaa ee ilaa hada la xuso tan iyo markii ay soo bilaabatay 2000. Dabcan Waxaa lagu dhisay aasaaska aqal Toledo duug ah laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad.
Hoteelka ayaa leh 25 qol oo sedex dabaq ah. 22 waa laba qol, laba waa fududahay midna waa suite. Dhammaantood waxay leeyihiin qaboojiye dhexe, musqul leh qallajiye timo, dayax gacmeed ama telefishanka telefishanka, ammaan, minibar iyo ammaan. Si kor loo aado waxaa jira wiish. Hoteelku wuxuu kaloo leeyahay baar, qol TV iyo makhaayad. Helitaanka internetka waa qol gaar ah ama WiFi.
Huteelkan ma ogola xayawaanka rabaayadda ah. Waa inaad ka xisaabisaa 44 Euro habeenkii iyo haddii aad si toos ah uga dalbato websaydhkaaga waxaad leedahay a 5% dhimis.
Huteelkan qarnigii XNUMX-aad wuxuu leeyahay seddex xiddigood oo wuxuu ku yaal Real del Arrabal, xarunta taariikhiga ah. Waa talaabooyin laga soo qaaday Plaza de Zocodover, ka hor Masaajidka Cristo de la Luz iyo Puerta del Sol, waana leben qurxoon oo la kashifay iyo birta oo la farsameeyay. Alcazar waxay u jirtaa 600 mitir, isla waa Primada Cathedral iyo Kaniisada Santo Tomé oo leh rinjiyeynta El Greco oo 800 mitir u jirta.
Hoteelka waa jawi qoys qolalkana, in kastoo ay fudud yihiin, waasac oo shaqeynayaan. Waxaa jira 54 qol guud ahaan, inta u dhexeysa 16 iyo 19 mitir laba jibbaaran. Waxaa jira qolal hal, labalaab, mataano iyo reer. Dhammaantood waxay leeyihiin kuleyl iyo hawo shaqsiyeed, taleefan toos ah, miis, TV shaashad fidsan iyo musqusha oo dhameystiran.
Hoteelka ayaa sidoo kale bixiya quraac iyo makhaayad cunno cunno leh maalin kasta qiimo jaban.
Kani waa hudheel ku yaal afar xiddigood oo si toos ah ugu yaal Plaza de Zocodover, oo kaliya 200 mitir u jirta Puerta del Sol de Toledo iyo inta kale ee soo jiidashada dalxiiska magaalada. Waxa fiicanna waa taas qolalka oo dhami waxay leeyihiin aragtiyo aad u wanaagsan oo ku saabsan fagaaraha waana kuwo aad u raaxo badan, oo leh qiimayaal laga bilaabo 160 euro habeen kaliya leh hoy.
Hoteelka ayaa bixiya Qolka Boutique, oo aad loo safeeyey, oo fiirinaya laba jibbaaran, naqshad casri ah iyo 30 mitir oo laba jibbaaran iyo musqusha marmar. Waxa kale oo jira qolal Junior Suite ah, saddex wadar ah, oo leh qol jiif iyo qol fadhiga iyo 40 mitir oo laba jibbaaran.
Soo jiidashada raaxada leh ee hudheelka waxaa lagu buuxiyaa waayo-aragnimada makhaayadda iyo dalabkeeda gastronomic. Waxaa ku yaal maqaayad ku taal meesha loo yaqaan 'Zocodover' waxaana sidoo kale jira maqaaxi laga qaxweeyo, Café el Español, oo laga cabo cabbitaannada iyo shaaha galabtii. Dabcan kuwani maahan hoteelada kaliya ee kuyaala magaalada weyn ee Toledo, laakiin waxaan rajeynayaa inay kuugu adeegi doonaan baxsigaaga xiga ee magaaladan qarniga jirsatay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Hoteellada boutique ee Toledo
Magaalooyinka ugu waaweyn Spain